Muxuu Ilaahay Urur u Leeyahay? | War Wanaagsan
Muxuu Ilaahay Urur u Leeyahay?
1. Muxuu Ilaahay reer binu Israaʼiilkii hore u abaabulay?
Ilaahay wuxuu u abaabulay faraca nebi Ibraahim siday u noqdaan qaran wuxuuna siiyay sharciyo. Qarankaas wuxuu u magac bixiyay “reer binu Israaʼiil.” Waxayna noqdeen qarankii keliya oo ahaa wakiilka iyo dhawraha caabudaadda runta ah iyo eraygiisa. (Sabuurradii 147:19, 20) Siday dadka quruumaha oo dhan ka yimid u barakoobaan.—Akhri Bilowgii 22:18.
Ilaahay reer binu Israaʼiil buu doortay inay markhaatiyaashiisii noqdaan. Taariikhdooda hore baa ina tusaysa siday Ilaahay sharciyadiisu dadka wax u taraan markay addeecaan. (Sharciga Kunoqoshadiisa 4:6) Dadka kalena markay fiiriyaan reer binu Israaʼiil bay garan kari lahaayeen Ilaaha runta ah.—Akhri Ishacyaah 43:10, 12.
2. Maxay Kirishtaanka runta ah u abaabulsan yihiin?
Waqti kaddib markay binu Israaʼiil Yehowah adeeci waayeen buu barakadiisii ka ceshaday oo qarankaas wuxuu ku beddelay Ciise raacayaashiisa. (Matayos 21:43; 23:37, 38) Maanta meeshii reer binu Israaʼiil Ilaahay waxaa u adeega Kirishtaanka runta ah iyagoo ah Yehowah markhaatiyaashiisa.—Akhri Falimaha Rasuullada 15:14, 17.
Ciise xertiisii wuxuu u abaabulay inay wacdiyaan oo quruumaha oo dhan xer ka dhigaan. (Matayos 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Imminkan dhammaadka waqtiga dunida aan joogno hawsha wacdiga heerkeedii ugu dambeeyay baa dhow. Maanta si aan weligeedba la arag buu Yehowah isku keenay dad malaayiin ka badan oo quruumaha oo dhan ka yimid siday si run ah Ilaahay u caabudaan. (Muujintii 7:9, 10) Kirishtaanka runta ah midnimo bay ku abaabulsan yihiin siday isku xoojiyaan oona is caawiyaan. Meel kastaba ay joogaan waxay isla wadaagaan barnaamij isku mid ah oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah markay kulammadooda aadaan.—Akhri Cibraaniyada 10:24, 25.
3. Sidee buu waageenna ururka Markhaatiyaasha Yehowah u bilaabmay?
Sanadihii 1870 waxaa jiray urur yar oo ahaa arday dhigan jirtay Kitaabka Quduuska ah. Waxay bilaabeen inay daahfuraan wax waqti dheer lumay. Waxyaalahaas waxay ahaayeen run Kitaabka Quduuska ah ku taal. Ardayda Kitaabka Quduuska ah dhigan jiray waxay garanayeen inuu Ciise isku ururiyay dadka Kirishtaanka ah siday u wacdiyaan. Si nidaam leh bay u bilaabeen wacdi caalami ah oo ku saabsan Boqortooyada Ilaahay. Sanadkii 1931 waxay qaateen magaca Markhaatiyaasha Yehowah.—Akhri Falimaha Rasuullada 1:8; 2:1, 4; 5:42.
4. Sidee bay Markhaatiyaasha Yehowah u abaabulsan yihiin?
Kiniisadihii * u horreeyay oo waddammo badan ku aasaasnaa waxaa hoggaamin jiray guddi keliya oo aqbalay inuu Ciise yahay Madaxa kiniisadda. (Falimaha Rasuullada 16:4, 5) Sidaas oo kale caalamigoo dhan maanta Markhaatiyaasha Yehowah waxay ka faaʼiidaystaan hoggaaminta Guddi Maammula. Guddigaas kuwa ka tirsan waa odayaal waaya arag ah. Guddiga Maammulku wuxuu hoggaamiyaa laamaha Markhaatiyaasha Yehowah oo dhan. Laamahaas 600 oo luqaddood in ka badan bay wargeys Kitaabka Quduuska ah ka yimid ku turjumaan, ku daabacaan oona ku faafiyaan. Guddigaas waxay hoggaamiyaan oo ku xoojiyaan talada Kitaabka in ka tiro badan 100,000 oo kiniisadood ee Markhaatiyaasha Yehowah adduunkoo dhan ku leeyihiin. Kiniisad kastaba waxaa u adeega odayaal ama hoggaamiyayaal garasho leh. Nimankaasi sidii adhijir kalgacayl badan uu idihiisa u xannaaneeyo bay dadka Ilaahay u xannaaneeyaan.—Akhri 1 Butros 5:2, 3.
Markhaatiyaasha Yehowah si habeysan bay warka wanaagsan u wacdiyaan oona dadka xer uga dhigaan. Guri ilaa guri waannu wacdinaa sidii rasuulladii oo kale. (Falimaha Rasuullada 20:20) Dadka daacadda ah oo runta jecel baannu barnaa Kitaabka Quduuska ah. Laakiinse Markhaatiyaasha Yehowah ma urur uun baa? Maya! Waxaannu nahay reer leh Aabbe aad inoo jecel. Waxaannu nahay walaalo is daneeya. (2 Tesaloniika 1:3) Dadka Yehowah waxay yihiin reerka ugu barakaysan dunida oo dhan waayo waxay u abaabulsan yihiin inay Ilaahay ka farxiyaan oona dadka kale caawiyaan.—Akhri Sabuurradii 33:12; Falimaha Rasuullada 20:35.
^ qayb. 6 Erayga ek·kle·si’a oo Giriig ah oo af Soomaali ku ah kiniisad waxaa ugu horreyn laga waday dad isla ururay oo ay hal ulajeeddo ka dhexeyso. Laga ma wadin dhismo.
Wadaag Wadaag Muxuu Ilaahay Urur u Leeyahay?